Marcus Rashford Oo Soo Xushay Daafacii Ugu Adkaa Ee Uu Wajahay Mana Aha Sergio Ramos, Virgil Van Dijk & Gerard Pique Oo Uu Dhammaantood Kahor Tagay!!. - Gool24.Net
Da’yarka kooxda Manchester United ee Marcus Rashford ayaa doortay daafacii ugu adkaa ee uu kahor tagay inta uu ku gudo jiray xirfadiisa ciyaareed ilaa haatan.
Rashford ayaa soo hilaacay sanadkii 2016 waxaana uu tan iyo markaas kamid ahaa kooxda koowaad ee Red Devils isaga oo soo wajahay daafacyada ugu fiican caalamka sida Virgil Van Dijk, Sergio Ramos, Gerard Pique, Thiago Silva & Giorgio Cheillini.
21 jirkan oo haysta khibradaas oo dhan isla markaana soo arkay daafacyada aan kor kusoo xusnay ayaa sheegay in daafaca dhexe ee kooxda Arsenal ee Laurent Kosceilny uu yahay midka ugu adag ee uu ilaa haatan wajahay.
Rashy oo ka hadlaya qoddobkaas ayaa yidhi “Waxaan filayaa shaqsi ka shaqsi ahaan waxa ay noqonaysaa Laurent Kosceilny oo Arsenal ah, Waxa uu ahaa daafac ay adagtahay in laga hortago”
Marka laga yimaado hadalka uu Rashford ku sheegay in daafacan ree France yahay midka ugu adag ee uu kahor tagay, Kosceilny ayaa sidoo kale qayb ka ahaa kooxdii Arsenal ee uu Rashford kulankiisii ugu horreeyay abid Premier League kasoo dhaliyay labada gool.
Laurent oo dhawaanahan dhaawacyo dishoodeen ayaa ah daafac aan hadana marnaba shaki ku jirin tayadiisa isag oo Gunners kasoo tirsanaa ilaa 2010 isla markaana 255 kulan soo matalay ilaa haatan.